Ceelgows Xogta Garoonka Cawaale: Tartan kubadeeda ku aadan is-dhex galka koonfur iyo waqooyiga Gaalkacyo oo furmayLast update 13-09-12Tartan kubadeeda ku aadan is-dhex galka dhalinyarada koonfur iyo waqooyiga Gaalkacyo oo ka furmay garoonka Cawaale.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tartankan oo loogu magac daray koobka dhalinyarada is-dhex galka da' yarta ee koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo da'doodu tahay 12 jir ilaa 14 jir ayaa galabta si habsami leh oga furmay garoonka Cawaale, waxaana ku tartamayay 8 kooxood.
Furitaanka tartankan waxaa ka qayb galay labada maamul ee Sportska iyo dhalinyarada, boqolaal qof oo u badan dadka daneeya ciyaaraha waxaana si weyn loogu riyaaqay magaca uu u huwan yahay ee is-dhex galka dhalinyarada da' yartaa ee Gaalkacyo si ay u sameeyaan is-dhex gal iyo jacayl dhexdoodaa.
Gudoomiyaha dhalinyarada & ciyaaraha Gal-mudug Ayaanle C/laahi Ducaale ayaa barnaamij muhiima ku tilmaamay tartankan wuxuuna si weyn uamaanay cid kastoo gacan ka gaysatay, isagoo dhalinyarada da' yartaa ku booriyay inay sameeyaan dadaal la gacan qabo karo oo bidhaamiyo hormar iyo is-dhex gal bulsheed.
Tartankan oo maanta lagu furay group A ayaa lagu bilaabay kooxda New suxufi iyo kooxda Ex wada-jir waxaana ciyaartaasi ay ku idlaatay 2--1 oo guusha ay ku raacday kooxda News suxufi, tartankan ayaa la ciyaari doonaa maalmaha Khamiista iyo jimcaha si dhalinta aysan oga mashquulin waxbarashada caadigaa, tartankan ayaa socon doona muddo bil iyo bar ah.
-- Wabilaahi Towfiq
Email: cabdiqani0903@gmail.com Gudoomiyaha Mudug iyo waxgarad kormeer ku tagay deegaanka Dhagaxyo-caddoBaarlamaanku wuu Garanayaa Khaladka, Balse Kama Hadli Karaan Amaankooda.Darteed Warbixin: DF oo la sheegay in ay arruurinayso Ciidan Qabiil oo loo ekaysiiyay ShabaabDhageyso, Fiiro gaar ah: Gabaygii Cusbaa ee m/wayne xasan Sh. Farxadda Jubaland iyo baroorta MuqdishoWaa kuma Ninka Uu Madaxweyne Hassan Culusow, u direy Kismaayo?Beesha Sade oo ka arinsanaysa sidii ay ka yeeli lahayd Col; Barre HiiraaleC/laahi Xuseen oo DF ku dhaliilay qaabka ay u maareysay dib-lumaasiyiinta SomaliaXiriirka Federaalka & SL oo sii xumaaday iyo Wasiirka Caafimaadka SL oo ka baxay Shirka ka dhacayey SwitzerlandDr.Farolle "Jubaland hadii la diido, dowladana waa la diidi"